Madaxweyne Lafta Gareen oo maanta furaya kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweyne Lafta Gareen oo maanta furaya kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed
Madaxweyne Lafta Gareen oo maanta furaya kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed
Magaalada Baydhabo xarunta KMG ah ee Dowladd Goboleedka Koofur Galbeed Soomaliya ayaa waxaa maanta ka furmaya kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka 2-aad oo waayihii dambe ku maqnaa fasax, kadib markii uu soo dhamaaday kaladhigii 1-aad.
Baydhabo waxaa ku sugan wufuud kala duwan oo lagu casuumay ka qaybgalka furitaanka kalfadhiga waxaana kamid ah Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka BFS Xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari & xubno kale.
Madaxweynaha DG KGS Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen ayaa furaya sida uu dhigayo dastuurka maamulkaas, waxaana lagu wadaa in uu kahor jeediyo khudbad uu uga hadlayo arrimaha maamulkiisa.
Sidoo kale, hadal jeedin ayaa la siinayaa martida oo Khudbaddooda xoogga ku saaraya waxqabadka & waajibaadka Laanta Xeer dejinta DG Koofur Galbeed mudada ay ku guda jiraan kalfadhigaan.
Ammaanka Magaalada Baydhabo Xarunta KMG ah ayaa aad loo adkeyay madaama halkaas ay ka dhaceyso munaasabada furitaanka kalfadhiga labaad.
Baarlamaanka Koofur Galbeed waxaa kamid ah shaqooyinka horyaalla inta ay ku guda jiraan kalfadhigaan labaad in ay doortaan Senatarada Golaha Aqalka Sare BFS ee saami ahaanta uga soo aaday & howlo kale oo horyaalla.